चितवनका सुकरामको पीडा : ५० लाखको जग्गा १० हजारमा यसरी गुमाए । – SMARTINFONEPAL
a complete information site
चितवनका सुकरामको पीडा : ५० लाखको जग्गा १० हजारमा यसरी गुमाए ।
3 weeks ago संम्पादक
‘केही गल्ती भएकाले बैंकमा पैसा नपुगेको बताउने गर्थ्यो तर अहिले फोनको स्विच अफ छ । जग्गा पनि उसले अर्कैलाई बेचिसकेछ ।’
चितवन : अब जग्गा बेच्ने अनि अलि राम्रो घर बनाउने । त्यसपछि पनि केही बच्यो भने छोराका लागि पुरानो मोटरसाइकल किन्ने । कालिका नगरपालिका–५ पदमपुरका सुकराम महतोको यति चाहना थियो । तर, ठगहरूको पासोमा पर्दा लाखौं पर्ने जग्गाको कौडी बराबरको मूल्य हात परेपछि उनको सबै सपना टुटेको छ ।
५० लाख रुपैयाँमा जग्गा किन्न राजी भएको व्यक्तिले सुरुमा बैंकमा १० हजार रुपैयाँ राखिदियो । जग्गा नामसारी हुने दिन ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ र १० लाख रुपैयाँको दुईवटा चेक पनि बैंकमा जम्मा गराइदियो । जग्गा नामसारी भएपछि सुकरामले बैंकमा गएर बुझ्दा खातामा एकसुको पनि थप पैसा नआएको पत्तो पाए । सुन्दाबित्तिकै उनको आँखाबाट धरधरी आँसु चुहिए । ‘जसले जग्गा किनेको हो उसले सुरु–सुरुमा फोन पनि उठायो । केही गल्ती भएकाले बैंकमा पैसा नपुगेको बताउने गर्थ्यो । तर अहिले फोनको स्विच अफ भएको छ,’ सुकरामले भने ।
सुकरामबाट फुत्काएको जग्गा उसले अरूलाई नै बिक्री गरिसकेको पत्ता लागेको छ । सुकरामको कथा सुनेका चितवन भरतपुरको मालपोत कार्यालयका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘यस्तो योजनाबद्ध ठगी मैले अझसम्म सुनेको थिइनँ । सोझा मान्छेलाई कसरी झुक्काएर जग्गा फुत्काउँछन् भन्ने यो घटनाले देखाएको छ ।’ सुकरामले साविक पदमपुर गाविस–७ को कित्ता नम्बर १७३१ नम्बरको ४२३ वर्गमिटर अर्थात् झन्डै २५ धुर जग्गा असोज २ गते सिन्धुपाल्चोक मांखा–७ घर भएका अगस्त तामाङलाई बेचेका हुन् ।
चितवन निकुञ्जले घेरिएको हुँदा सौराहादेखि दक्षिण राप्तीपारिको गाउँ पदमपुरलाई सरकारले स्थानान्तरण गरेर पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तर जुटपानी बरन्डाभार जंगल आडमा लगेर नयाँ बस्ती बसाएको थियो । पुरानो पदमपुरमा हुँदा सुकराम सुकुम्बासी थिए । अर्काको घरमा हरूवा बसेका थिए । हरूवा बस्दा एक कट्ठा ऐलानी जमिन जोडेका थिए । नयाँ बस्तीमा आएपछि ऐलानी जग्गा भएकाहरूले पनि नम्बरी जग्गा पाए । ‘मैले जोडेको ऐलानी जग्गाको पनि यता नम्बरी पाइयो । उता बाले पनि ऐलानी बराबरको यता नम्बरी जग्गा पाउनुभयो । दुई भाइ थियौं । अंशबन्डा गर्दा २५ धुर मैले पाएँ,’ सुकरामले सुनाए । उनले त्यही जग्गा बेचेका हुन् । उनको पहिल्यै आफ्नो नाममा रहेको एक कट्ठा जग्गा रहेको आडमा अर्को जग्गा छ । सँधियारले त्यो जग्गा बेच्छु भन्दै थिए । २० लाख रुपैयाँ जतिमा उनले आडको जग्गा किन्न पाउने भए । अंशमा पाएको २५ धुर जग्गा बेचेर आडको जग्गा किन्ने, बचेको पैसाले घर बनाउने । त्यसपछि पनि केही बच्यो भने छोराका लागि पुरानो मोटरसाइकल किन्ने ।
यही योजना बनाएर सुकरामले जग्गा बेच्ने ग्राहक खोज्न थाले । सुकरामको कुरो गाउँकै सुनील शाही भन्नेले थाहा पाए । उनले सिन्धुपाल्चोक ठेगाना भएका अगस्तलाई ल्याए । जग्गा मिलाइदिएबापत सुनीलले एक लाख रुपैयाँ अगस्तबाट कमिसन पाउने भए । अगस्तलगायत दुई–चार जना सुकरामको घरमा धाउन थाले । ३० लाख रुपैयाँबाट सुरु भएर जग्गाको अन्तिम मूल्य ५० लाख रुपैयाँ कायम भयो ।
कोरोना कहरका कारण चितवनमा निषेधाज्ञा थियो । निषेधाज्ञा खुलेलगत्तै जग्गा पास गर्ने सहमति भयो । अगस्तको टोलीले नै सुकरामलाई पदमपुर भीमोदय मावि चोकमा रहेको सिद्धार्थ बैंकको शाखा कार्यालयमा लगेर खाता खोल्दियो । बैनास्वरूप १० हजार रुपैयाँ राखिदिए । भदौ २९ मा बैंकमा खाता खोलेर नबिल बैंकको १० हजार रुपैयाँको चेक दिएर जम्मा गर्न लगाए । जग्गा पास गर्ने दिन पनि यसै गरेका थिए । नबिल बैंकको ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ र १० लाख रुपैयाँको दुईवटा चेक काटेर सिद्धार्थ बैंकको भरतपुर हाकिमचोकमा रहेको शाखा कार्यालयमा जम्मा गरे ।
सुकरामको नाममा काटेको चेक उनको खातामा जम्मा भएको भौचर हात परेपछि छोरा रोशन महतोले बाबुलाई जानकारी गराए । चेक खातामा जम्मा भइसक्यो भन्ने सूचना पाएपछि मालपोत कार्यालयमा रहेका सुकराम र श्रीमती बासमतीले कहाँ सही गर्नुपर्ने हो, कहाँ औंठा छाप लगाउनुपर्ने हो, सबै गरेर अगस्तको नाममा जग्गा नामसारी दिए । सुकराम जमानादेखि अर्काको घरमा हलो जोत्दै बसेका मान्छे । अहिले पनि केही खास काम गर्दैनन् । श्रीमती बासमती ज्याला मजदुरीको काम गर्छिन् । यसरी जुटाएको ८२ हजार रुपैयाँले इँटा किनेका थिए । इँटा किनेको १० वर्ष भए पनि जग खन्न सकेका थिएनन् । ‘आडको जग्गा २० लाखमा किन्ने कुरा भएको थियो । घर बनाउन २५/२६ लाख लाग्थ्यो होला । ठूलो हैन सानसानो बनाउने भन्ने योजना थियो । पैसा बच्यो भने छोराका लागि मोटरसाइकल किनौं भन्ने थियो । छोराको रहर थियो त्यो,’ बासमतीले भनिन् ।
असोज २ गते शुक्रबार नामसारीको सबै काम पूरा भयो । शनिबार बैंक खुल्ने कुरा भएन । आइतबार जति सक्दो चाँडो बैंक पुगेर सुकरामले पैसा आए नआएको सोधखोज गरे । नआएको सुन्दा भाउन्न भएर धन्नै लडेनन् । दुई वटा चेक भौचर काटेर जम्मा गरेकै हो । छोरा रोशनले राम्रैसँग हेरेकै हुन् । आखिर खातामा किन जम्मा भएन त पैसा ? सिद्धार्थ बैंक पदमपुर शाखाका प्रमुख सुनील खनाल भन्छन्, ‘हाम्रो हैन, अर्को बैंकको चेक थियो । उहाँले काटेको चेकको भुक्तानी गर्न पुग्ने पैसा नै चेक काट्नेको खातामा रहेनछ । अनि कसरी जम्मा हुनु ।’
अगस्तले आफ्नो खातामा पैसा नै नभए पनि सुकरामका लागि साढे ४९ लाख रुपैयाँको चेक काटेछन् । सुकराम रिसले आगो भएर अगस्तलाई फोन गरे । ‘धन्न फोन उठायो । हैन आउँछ आउँछ भन्यो । दुई–चार दिनपछि म पैसा ल्याएर तपाईंको घरभरि फाल्दिन्छु पनि भन्यो । अनि पछि त फोन स्विच अफ नै गरेर बस्यो,’ सुकरामले भने । सुकरामले यो कुरा आफ्नो भान्जी ज्वाइँ लोकेन्द्र चौधरीलाई पनि सुनाए । लोकेन्द्रले अगस्तलाई फोन गरे अनि रेकर्ड पनि गरे । लोकेन्द्रसँग अगस्तले राम्रैसँग कुरा गरेका छन् । फोनमा उनले ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ डिपोजिट हुन नसकेको स्वीकार गर्दै भोलि २ बजेसम्म पैसा डिपोजिट गर्ने भनेका छन् । तर भोलिपल्टबाट फोन स्विच अफ भयो । लोकेन्द्रले पत्ता लगाए, त्यो जग्गा अगस्तले असोज ६ गते काठमाडौं–१७ की अबिरा वज्राचार्यलाई बेचिसकेछन् । मालपोत कार्यालय प्रमुखले पनि यही कुरा बताए । ‘अबिरालाई जग्गा नदिँदासम्म फोन पनि उठाउने, पैसा दिन्छु पनि भन्ने गरेको रहेछ । ६ गते जग्गा पास गर्‍यो । त्यसपछि फोन स्विच अफ,’ लोकेन्द्रले भने ।
सुकरामले आफू ठगिएको भन्दै चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता पनि गराएका छन् । चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी सूर्य थापाले यो विषयमा अनुसन्धान गर्न दुई जना समातिएको र बाँकी अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
बैंकमा चेक जम्मा गराएको भौचर नै पेस गरेपछि र छोरादेखि जग्गाधनी सबैले पैसा बुझ्यौं भनेपछि जग्गा पास भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । मुद्दा परेर ठगी गरेको प्रमाणित भएमा अदालतले बिक्री खारेज गरेर सुकरामलाई जग्गा दिलाउन सक्ने उनले बताए । ‘जग्गा किनबेचमा सोझा व्यक्तिहरू अनेक तरिकाले ठगिन्छन् । मान्छे सोझो, सिधा देखेर सुकरामलाई त्यस्तो चेक दिए,’ मालपोत प्रमुख पौडेलले भने ।
Previous बिहे भएको पुरुषसंग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? यी ६ कारण हरु ।
Next निर्वासनबाट जन्मभूमि टेकेको त्यो दिन…
इमान्दारीताले मात्र हुँदैन, राम्रो पार्टनर बन्नु छ भने यस्ता विशेषता हुनुपर्छ ।
13 hours ago संम्पादक
महिला योनीका आकार थरिथरिकाः यौनसन्तुष्टिमा फरक पर्छ के ?
2 days ago संम्पादक
कुन कुन राशिका महिला कसरी तयार हुन्छिन त शारिरीक सम्बन्ध बनाउन?
4 days ago संम्पादक
Archives Select Month October 2020 (14) September 2020 (32) August 2020 (46) July 2020 (27) June 2020 (25) May 2020 (59) April 2020 (212) March 2020 (65) February 2020 (74) January 2020 (113) December 2019 (123) November 2019 (139) October 2019 (174) September 2019 (26) August 2019 (13)
WORLD GAME (21)
मुख्य समाचार (872)
याैन केबल बच्चा जन्माउनका लागि होइन, केवल मनोरञ्जनको लागि हुनेछ ?
नेपालका शंकर ग्रुपको सबै सम्पत्ति रोक्न दबाब र हारगुहार ।
7 days ago संम्पादक
हाम्रो बारे ।
निर्देशक : बिशाल तामाङ
सम्पादक : रामकृष्ण चौधरी
ब्यबस्थापक : कृष्ण चौधरी
बजार ब्यबस्थापक : सुन्दर श्रेष्ठ
जापान प्रतिनिधि : सुमित,सन्दिप
अमेरिका प्रतिनिधि : बिकास
युरोप : भिमा चौधरी
सम्पर्क नं .
PAN : 605097667
दर्ता नम्बर :